स्टीव वोज्नियाक: "हामी सरकारलाई विश्वास गर्न सक्दैनौं" | आईफोन समाचार
स्टीव वोज्नियाक: "हामी सरकारलाई विश्वास गर्न सक्दैनौं"
एप्पल प्रकाशित भएकोले चिठी जसमा उनले १5व्यक्तिको मृत्यु हुने एक स्नाइपरको आईफोन c सी अनलक गर्न आफ्नो सहयोग दिन अस्वीकार गरे, त्यहाँ धेरै कम्पनीहरू र महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू छन् जसले उनको समर्थन प्रस्ताव गरेका छन्। सुन्दर पिचाई (गुगल), एडवर्ड स्नोडेन (एक्टिविस्ट) वा जान कौम (व्हाट्सएपका संस्थापक) यी तीन व्यक्ति हुन् जसले टिम कुकलाई आफ्नो गोपनीयतामा जोगाएका थिए। अन्तिममा बोल्नेहरू एप्पलका सह-संस्थापक थिए, स्टीव Wozniak.
वोज्नियाक एक शब्द हो जसमा शब्दहरू खेर फाल्दैनन्। ऊ जे भन्छ त्यसले सधैँ भन्छ। जब एप्पलले आईफोन introduced लाई प्रस्तुत गर्‍यो, त्यसले भन्यो कि “यो केवल एक आईफोन was एस थियो र आइकनहरूको एक बढी प row्क्तिको साथ“र जब उनीहरूले आईफोन launched सुरू गर्‍यो, उनीहरूले त्यो बजारमा उनीहरूलाई late बर्ष ढिला भएको बताएनन्। अब उनी भन्छन् कि हामी सरकारलाई विश्वास गर्न सक्दैनौं र उनीहरूको विवादमा टिम कुकको पक्षमा छौं एफबीआई को विरुद्धमा हाम्रो गोपनीयता को पक्षमा।
Woznkiak ले पनि गोपनीयताको पक्ष लिन्छ
म विश्वास गर्दछु कि एप्पलको विशिष्ट ब्रान्ड र यसको मूल्य र सुविधाहरू मुख्य रूपमा ट्रस्ट भनिने चीजमा आधारित छन्। विश्वास भनेको तपाई कसैलाई विश्वास गर्नु हो। तपाईलाई लाग्छ तपाई ईन्क्रिप्शनको साथ फोन किन्नु भएको छ।
तपाईं विश्वास गर्न सक्नुहुन्न जोसँग शक्ति छ। यो अधिकारीहरू र प्रहरीहरूमा उनीहरू विश्वास गर्नु जस्तै हो जहाँ तिनीहरू गए। सामान्यतया जब तिनीहरू नियम लेख्छन्, तिनीहरू सही भए पनि तिनीहरू गलत हुन्छन्।
आतंकवाद एक झूट शब्द हो जुन प्रयोग भइरहेको छ। हालको केसमा एप्पल संलग्न भएको साथ हुनु पर्‍यो - मलाई लाग्छ कि यो शूटिंग वा हत्या वा केहि थियो। यो आतंकवाद थिएन। आतंकवाद भनेको के हो? यो केवल एक गहिराइ अपराध हो। "आतंकवादी" शब्द धेरै पटक मानिसहरूलाई डराउन प्रयोग गरिएको छ।
जब उनले सोध्यो कि एप्पलले एफबीआईको अनुरोधमा सहयोग पुर्याउँछ भने, वोज्नियाकले स्वीकार गरे कि यो डर छ तर थाहा छैन। यदि उहाँ एप्पलमा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरूले जे गरिरहनु भएको थियो त्यही गर्नुहुन्छ म अन्त सम्म लड्न हुनेछ.
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » स्टीव वोज्नियाक: "हामी सरकारलाई विश्वास गर्न सक्दैनौं"
स्मार्टवाच बिक्रीले परम्परागत स्विस घडीहरू पुर्‍याउँछ